အသားဒိန်ချဉ်နှပ် နှင့် တုံမ်ယမ်း ~ စန္ဒကူး
အိန္ဒိယန်းတွေတော့ ဒန်သူရီ လို့ခေါ်တယ်ထင်တာပဲ
ဟုတ်တယ်.. အိန္ဒိယဆိုင်တွေက တော့ spice ပိုစုံလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ကြက်သားနဲ့လုပ်တာများတယ်။ ပြီးတော့ မီးပေါင်းဖိုထဲ ထည့်ဖုတ်တာ။ထင်တာဘဲ။ တစ်ခါမှတော့ မစားဖူးဘူး။ ကုလားဆိုင်ရောက်ရင် ပဲသီးစုံနဲ့တင်ကျေနပ်နေပြီ။
sar chin sa yar lay par lar ku ku yae.
look so yuumy....
look so yummy .........(reader)
Thanks for sharing, I love to eat tandoori chicken, vegetables curry, etc, too.
ကောင်းတယ် ကူးကူးရေ...အသားလုပ်စားဦးမယ် အဆာပလာတွေလည်းရှိတယ် အတော်ပဲ
အမဲသားတော့ မစားဘူး ကူးရေ
စားချင်စရာလေး... စမ်းချက်ကြည့်ဦးမယ် ခလေးတွေလဲကြိုက်မှာ
နနွင်း (ဆနွင်း) ပါတယ် ထင်တယ်နော် ၀ါဝါ၀င်းဝင်းလေး